ट्रकले आज दिउँसो मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा बाबु र छोराको मृत्यु, परिवारमा रुवाबासी ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > ट्रकले आज दिउँसो मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा बाबु र छोराको मृत्यु, परिवारमा रुवाबासी !
दमक, भारतीय मालबाहक ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा झापाको दमक चोकमा आज दिउँसो बाबु र छोराको मृत्यु भएको छ ।
ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दुवैको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले जनाएको छ ।
प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र एकतेनका अनुसार मृत्यु हुनेमा मोरङ पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–९ का ६३ वर्षीय धनप्रसाद गिरी र उहाँका २९ वर्षीय छोरा हेमचन्द्र रहेका छन् । ठक्करबाट सख्त घाइते दुवैको स्थानीय लाइफलाइन अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक एक्तेनले बताउनुभयो ।
नेपालमै भेटियो लाखौंको कार चढ्ने ‘भगवान’, हिँड्दैनन् पैदल, यस्तो छ वास्तविकता (हेर्नुहोस् भिडियो)